ရှီ၏ CPC-နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မိန့်ခွန်းကို အလေးအနက်လေ့လာသင်ယူရန် CPC ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေရုံးက တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ဇူလိုင် ၁ ရက်က ပေကျင်းမြို့ ထျန်းအန်းမင်ရင်ပြင်၌ ကျင်းပသည့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် အရေးကြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှီကျင့်ဖိန်အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ(CPC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်၏ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သော အရေးကြီး မိန့်ခွန်းကို အလေးအနက်ထား လေ့လာသင်ယူကြရန် ဌာနအားလုံး နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေရုံးက တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။ယင်းမိန့်ခွန်းသည် မာစ့်ဝါဒ၏ အစီအစဉ်တကျဖြစ်တည်မှုတစ်ခုကို ပံ့ပိုးထားပြီး ခေတ်သစ်တွင် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များအတွက် နိုင်ငံရေးကြေညာစာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နှင့် တရုတ်ပြည်သူများအား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရေး သမိုင်းမှတဆင့် လေ့လာဆည်းပူးရန် နှင့် ပိုမိုတောက်ပသော အနာဂတ်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ပါတီစည်းလုံညီညွတ်မှုအတွက် ပြုဖွယ်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း အထွေထွေရုံး၏ စနေနေ့က ထုတ်ပြန်သော စာတမ်းတစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းစာတမ်းတွင် ရှီ၏မိန့်ခွန်းကို အဓိက နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု နှင့် ပါတီဝင်များအား လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုအဖြစ် လေ့လာရန် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အားထုတ်သွားရန် တိုက်တွန်းထားပြီး ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် အလွန်အရေးပါမှု နှင့် ကောင်းမွန်သော ပို့ချချက်ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်သွားရန် ၊ မိန့်ခွန်း၏ လက်တွေ့ကျသော လိုအပ်ချက်များ နှင့် ထူးခြားချက်များကို မှတ်သားသွားရန် နှင့် ယင်းနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏အတွေးအမြင်များကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြသွားရန် ထည့်သွင်း ရေးသားထားသည်။
အားလုံးက လေးစားရသော အသင့်တင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရာတွင် သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ခြင်းကို နက်ရှိုင်းစွာ သိရှိနားလည်အောင် လုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း ၊ CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက် နှင့် ပါတီ၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် မဟာတည်ဆောက်မှု ကို လုပ်ဆောင်ရင်း အမျိုးသားသွေးသစ်လောင်းမှုဆီသို့ရှေ့ရှု၍ ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရာတွင် ပါတီဦးဆောင်မှုဖြင့် တရုတ်ပြည်သူများအား လမ်းပြကာ ပြီးခဲ့သော ရာစုနှစ်အတွင်း ထူးကဲသော ခရီးရှည် နှင့် မဟာရဲရင့်မှုကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည်မှာ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ပင် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းစာတမ်းက ဆိုသည်။
မိန့်ခွန်းအား လေ့လာမှု နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို အခြေခံအဆင့်တွင် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း နှင့် အများပြည်သူအကြား ပြည်သူ့ဗဟိုပြုရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း စာတမ်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
CPC Central Committee general office urges earnest study of Xi’s CPC-centenary speech
BEIJING, July3(Xinhua) — The General Office of the Communist Party of China (CPC) Central Committee has urged all departments and local authorities to earnestly study an important speech delivered Thursday by Xi Jinping, general secretary of the CPC Central Committee, at the ceremony marking the centenary of the CPC.
The speech providesaprogrammatic document of Marxism,apolitical proclamation for Party members in the new era, andaguide to action for the Party in uniting and leading the Chinese people to learn from history and createabright future, according toacircular issued by the office Saturday.
The circular called for efforts to study and implement the speech asamajor political task and to guide Party members, officials and the public to grasp the great significance, rich connotation, underlying essence and practical requirements of the speech and align their thoughts and actions with it.
Efforts should be made to deeply understand the historic achievement of buildingamoderately prosperous society in all respects, the glorious journey and great feats in the past century that witnessed the Party leading the Chinese people in tireless struggle toward national rejuvenation, the great founding spirit of the Party, the fundamental requirement and call of the CPC Central Committee, the document said.
The study and communication of the speech should also be extended to the primary level and oriented toward the general public, it said. Enditem